Ka ọ dị Flash na gam akporo | Site na Linux
Ka Ọgọst 15, Adobe kwusiri nkwado ya maka Flash na sistemụ android.
Ndị nwere ngwụcha gam akporo na arụnyere Flash ga-enwe ike ịga n'ihu ịmepe ọdịnaya na usoro ahụ, mana ha agaghịzi enweta nkwado gozie na nke ohuru mmelite. Android 4.0 Ice Cream Sanwichi ga-abụ nke ikpeazụ Flash ga-abịa wụnye.
Adobe na-arụ ọrụ iwepụ na Linux ụwa na ọkwa ọhụụ a bụ akụkụ nke amụma doro anya na-agbanwe agbanwe. Ka anyị ghara ichefu na n’ọnwa Febụwarị nke afọ a, Adobe kwupụtara na ọ gaghị enyekwu Nkwado Flash na Linux sistemụ (belụsọ maka mmelite dị nkpa ma ọ bụ nchekwa), yana Chrome / Chromium bụ naanị ihe nchọgharị Internetntanetị maka Linux nke ga-enweta mmelite ọhụrụ. Ọbụna tupu nke ahụ, Adobe kwụsịrị ịhapụ mmelite maka AIR.
Ebee ka Adobe na-arutu ihe niile a aka? O doro anya na mbibi nke aka ya: na-enye aka na mmepe nke HTML 5.
Otú ọ dị, nke a bụ oké ozi ọma maka ndị hụrụ free software. Ka ọ dị ugbu a, nyiwe abụọ na-achịkwa ahịa ngwaọrụ mkpanaka, iOS na gam akporo, enweghịzi nkwado Flash, nke na-akwalite mmepe nke usoro ndị ụkpụrụ ọhụrụ kwadoro (HTML 5, CSS 3, wdg).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ka ọ dị Flash na gam akporo
Ọ dị mma, ndị Adobe abụghị ndị nzuzu ma kwado ogologo oge HTML5 tool suit createjs (createjs.com), na mgbakwunye na-arụ ọrụ na Adobe Edje, nke ga-abụ nha nke ngwanrọ mmepe Flash. N'ezie ugbu a, createjs bụ otu kachasị mma nke ngwaọrụ maka ọrụ na HTML5.
Ka o sina dị, maka m, FLASH abụwo ọrịa kansa nke ịntanetị, ọ ga-adị mma maka ihe ndị ọzọ mana maka ịntanetị anyị nwere HTML5, PHP5 NA JQUERY nke na-enye anyị ohere ịme ihe niile ọkụ mere na ibe weebụ ma na-ahapụghị. ewepu ụkpụrụ na ndakọrịta n'etiti ihe nchọgharị na ngwaọrụ!
ỌNW TO AKW FLKWỌ!
Magburu onwe ya, ozi kachasị mma nke ụbọchị ...
Mkpebi URL belata na iwu (Bash)